Depiote miisa 73 : Fanetriben’ny taranaka malagasy -
AccueilSongandinaDepiote miisa 73 : Fanetriben’ny taranaka malagasy
Depiote miisa 73 : Fanetriben’ny taranaka malagasy
Mazava izao fa ireto depioten’ny « fanovana » ireto mihitsy no manakorontana ny fampianarana eto Madagasikara. Resaka fampandriana adrisa fotsiny araka izany ny filazan’izy ireo ny amin’ny hoe « tsy ireo mpianatra fa ny mpampianatra no taominy hitokona ao anatin’izao tolona ataon’izy ireo izao ». Ny mifanohitra amin’izany anefa no zava-mitranga manerana ireo faritra maro eto Madagasikara manoloana izao fanakorontanana ataon’ireto depiote ireto. Ireo mpianatra ohatra no natao fitaovana nilanja sora-baventy nanamarika ny tsy fankasitrahan’ireo mpandraharaha ny fitondrana ankehitriny tany Ambatondrazaka. Mbola ireo mpianatra ihany koa no nampiadiana tany Ambositra noho ny « tolona” nataon’ireto lazaina fa solombavambahoakan’ny fanovana ireto. Nialoha izay dia ireo mpianatra no ampiasaina amin’ny famoahana ireo namany any Fianarantsoa, sy amin’ireo faritra maro hanaovana fanakorontanana ankehitriny. Omaly dia ireto depiote ireto mihitsy no niditra an tsehatra nanakorontana ny fampianarana teny Ankatso.
Tsy manome ohatra tsara ho an’ny taranaka araka izany ireto olona noheverina fa mba anisan’ireo nanam-panahy sy hendry teto amin’ny firenena. Fampiadiana sy herisetra, ary fampisaraham-bazana ireo tanora malagasy mantsy no asehony ankehitriny. Ny tena loza dia toa tsy mihevitra izay ho avin’ireto zanaka malagasy ireo depiote, fa miezaka ny manimba izany amin’ny fomba rehetra. Maro amin’ireo Ray aman-dReny araka izany no mametraka fanontaniana hoe hanao ahoana re raha sanatria ka mahazo fahefana mihoatra noho izao ireto Depiote ireto? Mbola tsy eo amin’ny toerana aza izy ireo ankehitriny izao no ataony, maika fa raha omena azy izay ilainy, tsy ho kizo fara ny taranaka? Fanontaniana efa voavaly sahady raha ny toetra, sy ny fomba asehon’ireto depiote ireto amin’izao fotoana izao no jerena. Toa tsy tsapan’izy ireo akory ny fahasahiranan’ny Ray aman-dRenin’ireto mpianatra amin’ny fitadiavana ireo kojakoja rehetra ahafahan’ny zanany mitovy amin’ireo mpianatra rehetra, noho ny fitiavan-tseza sy fahefana.
Hentitra dia hentitra ny kaomisera divizionera Liberia Ruffin manoloana ny fiampangana azy ireo ho tafiditra anatin’ny fampandehanana an’i Razaimamonjy Claudine hitsabo tena any ivelany. Ho azy ireo, rehefa mazava ny taratasy, izay miisa telo teo ...Tohiny
Festival Tamaga Midôla : Nanao poa-droa i Toamasina